BackGround History » Technological University (Sittwe)
History of its background
Technological University was operated on 27th December, 1999 asaGovernment Technological College (Sittwe) in six acres wide campus in PyaydawThar Quarter, Sittwe. Since 7th February, 2005, it has been transferred to three-storey building and courses have been opened there.
On 20th January, 2007, it was promoted to Technological University (Sittwe). Dr. Kyaw Hlaing Oo, Associated Professor of Ph.D (Chemical) is taking his responsibility as Principal at present.
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(စစ်တွေ) ယခင်နာမည်(အစိုးရနည့်းပညာကောလိပ်၊စစ်တွေ)အား ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၇)ရက်နေ့တွင် စစ်တွေမြို့ ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၌ အကျယ်အဝန်းဧက (၆ဧက)ရှိသော မြေကွက်တွင် စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၇)ရက်နေ့တွင်စစ်တွေမြို့နယ်၊ ခုတင်ပိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေချမ်းပြင် ကျေးရွာအနီး အကျယ်အဝန်း(၄၀ဧက)ရှိသောမြေကွက်တွင် အသစ် ဆောက်လုပ်ထား သော သုံးထပ်ဆောင်သစ်တွင် ပြောင်းရွှေ့ သင်ကြားဖွင့်လှစ် လျှက်ရှိပါသည်။ တက္ကသိုလ်အဆင့်သို့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၀)ရက်နေ့တွင် တိုးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။ ခေတ္တကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ်ဒေါက်တာကျော်လှိုင်ဦးPh.D(Chemical)ဒုတိယ ပါမောက္ခ မှ တာ၀န်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိ ပါသည်။
Technological University (Sittwe) is located near in RaChanByin Village, Sittwe township, Sittwe District, Rakhine state. University is operated in forty acres wide campus. At present, the university is opening its courses inanew three-storey building.
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(စစ်တွေ) သည် စစ်တွေမြို့နယ်၊ခုတင်ပိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေချမ်းပြင်ကျေးရွာအနီး အကျယ်အဝန်း (၄၀ဧက)ရှိသောမြေကွက်တွင် အသစ်ဆောက်လုပ်ထား သော သုံးထပ်ဆောင်သစ်တွင် သင်ကြားဖွင့်လှစ်လျှက်ရှိပါသည်။
Copyright © 2018 Technological University (Sittwe). All Rights Reserved.